नागपञ्चमीमा यसपटक अनौठो संयोग, क–कसलाई हुनेछ लाभ ? – Sandesh Munch
नागपञ्चमीमा यसपटक अनौठो संयोग, क–कसलाई हुनेछ लाभ ?
July 17, 2020 285
काठमाडौं – यसपटक नागपञ्चमी साउन १० गते शनिबारका दिन परेको छ । नागपञ्चमी साउन महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन नागको पुजा गर्ने चलन छ । भगवान शिवको गलामा भएको नाग वासुकि हुन् । नाग पञ्चमीमा वासुकी नाग, तक्षक नाग र शेषनागको पुजा विधि अनुसार गरिन्छ । उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रपछि हस्त नक्षत्र रहनेछ ।
यस क्रममा मंगल वृश्चिक लग्नमा जाने हुदाँ खास संयोग हुनेछ । यसै दिन कल्कि भगवानको जयन्ती र विनायक चर्तुर्थीको व्रत प्रारम्भ हुनेछ । नाग पञ्चमी देवः नागपञ्चमी पुजा र व्रतका ८ देवलाई मानिएको छ । अनन्त, वासुकी, पद्य, महापद्य, तक्षक, कुलीर, कर्कट र शंख नामका अष्ट नागहरुको पुजा गरिन्छ ।
नागपञ्चमीको व्रत गर्नेहरुले चतुर्थीको दिनमा एकपटक भोजन तथा पञ्चमीको दिन उपवास गरेर बेलुका व्रत खोल्नु पर्छ । नाग पुजाः पुजा गर्न नागको चित्र वा माटोको सर्पको मुर्ति बनाएर ढोकाको माथी बेसार, चामल र फुल चढाएर नाग देवताको पुजा गरीन्छ । त्यसपछि दुध, घीउ र चीनी मिसाएर नाग देवतालाई अर्पित गर्नुपर्छ । नागलाई आरती उतार्नु पर्छ । यदि घरको वरिपरि सर्प आएमा पनि नागको पुजा गर्ने प्रचलन छ । सर्पलाई दक्षिण फर्केर पुजा गरी बिदा गर्नु पर्छ । र अन्त्यमा नाग पञ्चमीको कथा सुन्नुपर्छ ।
उद्धार टोलीसँग मलाई भागवानले बचाउँछन तिमीहरु जाउ भन्ने व्यक्तिलाई बाढीले डुवायो
काठमाडौं – बाढीले एउटा सानो शहरलाई डुबाउने खतरा बढिरहेको थियो । सबै मान्छेहरु सुरक्षित स्थानतीर गए । एउटा मान्छे ‘भगवानले मलाई बचाउने छन भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ’ भन्दै त्यही बसे । पानीको स्तर बढेपछि उ घरको दोश्रो तलामा गए र एउटा नाउ उसलाई बचाउन आयो । फेरी तिनले मलाई देवताले बचाउने छन भन्दै सुरक्षित ठाउँमा जान अस्वीकार गरे । पानीको स्तर अझै बढ्यो र उ छतमा गयो ।
हेलिकप्टर उनलाई बचाउन आयो तर उनले देवताले बचाउने छन भन्दै जान फेरी पनि अस्वीकार गरे । अन्त्यमा पानीमा डुबेरको उनको मृत्यु भयो । उनी जब उ देवता भएको ठाउँमा पुगे, देवतालाई रिसाएर सोध्यो, ‘प्रभु तपाईँ प्रति मेरो पूर्ण आस्था थियो । तर किन मेरो प्रार्थनालाई वेवास्ता गरी मलाई डुवाउनु भयो । ?’ देवताले उत्तर दिए, ‘उसो भए तिमीलाई गाडी, डुङ्गा र हेलिकप्टर कसले पठाएको होला ? केही सोच्यौं ।’ धमण्डी मान्छेहरु प्राय अरुको विश्वास गर्दैनन् ।
तसर्थ, उत्तरदायित्व स्वीकारेर साथै कारण र परिणामा विश्वास गरेर भाग्यवानी धारणहरुबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ । भाग्यमा विश्वास गरेर कोही पनि सुरक्षित हुँदैन । जीवनमा कुनैपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्य, योजना र तयारी आवश्यक पर्दछ ।
Prevस्थायी कमिटी बैठकअघि ओली र प्रचण्डबीच छलफलको तयारी
Nextभूतपूर्व सैनिक संघका पूर्व अध्यक्ष गुरुङको निधन
तनहुँमा एक बच्चासहित छ चितुवाको मृत्यु, आठको उद्धार